Imibono Yosuku LweKildare Ngomehluko - KuKildare
Couples, Amagugu Afihliwe, Izinto Ozozenza
Isidlo esikhanyiswe ngamakhandlela, iroses eyodwa ebomvu, amabhaluni amise okwenhliziyo - bekulapho, bakwenzile lokho! Kungani ungalugubhi uSuku lwezithandani ngokuhlukile kulo nyaka, ngalezi ziphakamiso ezivela ku-Into Kildare.
Thola i-Arty Le V-Day
Ufuna okuthile okuhluke ngokuphelele ukumaka lesi sikhathi sothando? Kwethulwa i-Paint Club eCarton House! Umcimbi wezenhlalo oyingqayizivele nobuciko, iPaint Club izokwenzeka eManor House of Carton ngomdwebi omkhulu ozokusiza udale ubuciko bakho.
I-Paint Club yenzelwe wonke umuntu, ngaphandle kokuhlangenwe nakho okudingekayo! Konke kuzonikezwa, useyili, upende, i-easel, amabhulashi, iphinifa, konke okudingayo nguwe uqobo nomdlandla omningi!
Noma ngabe ungumculi osunguliwe noma isiqalo esiphelele, zenzele ubuciko bakho bangaphakathi futhi ujabule nePaint Club eCarton House.
Kulabo Abashadikazi Abangaphandle
Okuthunyelwe okwabiwe yi-Abbeyfield Farm (@abbeyfieldfarm)
Yini ethandana kakhulu kunokuphuma ungene emoyeni opholile wasemaphandleni wase-Kildare futhi ujabulele ingaphandle elihle?
Phatha othandekayo wakho usuku oluthile e-Abbeyfields Country Pursuits ngokudubula kwamajuba wobumba, ibanga lesibhamu somoya, umnsalo wokushaya umnsalo kanye nesikhungo samahhashi. Ukulungiselela amaphathi amancane kusuka kubantu ababili kuya kwabayisikhombisa, lawa amaValentine aphelele kuleyo mibhangqwana engaphandle efuna usuku olunomehluko.
Ifakwe kumahektare angaphezu kwama-240 wezindawo ezinhle zasemaphandleni zaseKildare, i-Abbeyfield ingaphansi kwemizuzu engama-20 ngemoto ukusuka eDublin's M50.
Thatha Ukuya Emanzini Nothandekayo
Okuthunyelwe okwabiwe nguGer Loughlin (@bargetrip)
Yini ethandwa kakhulu kunohambo lwesikebhe olucwathile oluntanta phansi ngemisele yaseKildare?
Shiya umhlaba wonke ngemuva lapho uhamba ngesikebhe bese uthatha ukuthula kwamanzi kudlula imvelo enhle osebeni lomsele.
IBargetrip.ie charter cruises yangasese emigodini, eneshampeni netiye lantambama, enama-sandwich, ama-scones, amakhekhe abucayi netiye. Isikebhe sinemfudumalo futhi sikhululekile ngesitofu esivuthayo sokhuni, umculo omnene ngemuva nangasemaphandleni angaphandle uma ufuna ukuphuma ngaphandle.
Thola amahhashi Azungeze Le V-Day
IBrallistown Encane, iTully
Okuthunyelwe okwabiwe yi-Irish National Stud & Gardens (@irishnationalstudandgardens)
Gxilisa usuku lwakho olukhulu ngesikhathi sokuya e-Irish National Stud and Gardens. Asikho isikhathi esingcono kunamanje sokuvakashelwa njengoba iStud isanda kuvulelwa u-2019, futhi igcwaliswe ngamathole amahle asanda kuzalwa ukuze ahlehle!
Thatha uhambo lokuzulazula phakathi kwezingadi zaseJapan ubabaze amaLiving Legends abiza amakhaya ama-Irish Stud.
Indawo yokudlela yaseJapane Gardens iyindawo efanelekile yokujabulela isidlo sasemini esisondelene, esikhululekile sababili, ngokudla okulula, okunempilo ngokugcizelela ubumnandi nokunambitheka.
Okuthunyelwe okwabiwe nguKildare Farm Shop & Open Farm (@kildarefarmfoods)
Uma uValentine wakho ehlanya abangane abanoboya, ngena ezincwadini zabo ezinhle bese uhlela usuku lokuya eKildare Farm Foods ngalo mhla ziyi-14 kuNhlolanja!
Kugcwele izilwane ezihuqayo, ezinkulu nezincane, i-Kildare Farm Foods usuku olugcwaliswe ngokuphelele lokuzijabulisa lwalabo abashadikazi abafuna usuku lokuphumula, nolulula. Epulazini ungathola ama-wallabies, izintshe, ama-alpaca, ama-mara, izingulube, izimbuzi, amaponi, izinyamazane, izimvu nokuningi!
Khohlwa ukudla okumnandi okuhehayo newayini elibizayo, kungani ungajabuleli isidlo sasemini esimnandi kwiTrekta Cafe!
Okuthunyelwe okwabiwe nguMondello Park (@mondellopark)
Mnike usuku lwezithandani lokukhumbula lo nyaka nohambo oluya eMondello Park! Indawo ye-motorsport yamazwe omhlaba ikuvumela ukuthi ubhukhe umjaho wokugijima esikhungweni esikhulu somoya somuntu omthandayo - isipho esiqinisekile sokukuwina umklomelo we-Partner Of The Year!
Uma ungathanda ukuhlala phansi ubukele, iMondello Park ibamba iSpring Break Bash Party ngoFebhuwari 16 no-17
Izinsuku ezimbili zesikhathi esilandelwayo somkhondo, izakhiwo ezine zobuhlanya, umncintiswano we-2019 Drift Games Nationals Licensing, imoto ye-Drift Games Extreme yembula, ukugibela kwabagibeli nezinyathelo eziningi zokuhamba kunalokho umuntu ovamile angakwazi ukuzisingatha - lokhu nakanjani kuzoba usuku oluhle kakhulu lwe-V-Day NGAPHAKATHI kwalowo mthandi wemoto empilweni yakho.
Okuthunyelwe okwabiwe nguLullymore (@lullymoreheritagepark)
Kuvunyelwe yiFailte Ireland ne-Ancient East yase-Ireland, iLullymore Heritage Park iyindlela ehlukile futhi emnandi yokulethela umuntu wakho okhethekile lolu suku luka-Valentine!
Thola umlando wasendulo weLullymore, uhlole izimfihlo nezindaba zamapheatland, futhi uvakashele imizila yemvelo ebandayo namachibi angatholakala kuwo wonke amahlathi aseLullymore.
Kukhona nekhefi elikhulu nesitolo sokubamba ukuluma ongakudla esizeni kanye nezindawo eziningi zepikiniki zokudlela kwangaphandle. Ukupaka kumahhala.
CouplesAmagugu AfihliweIzinto Ozozenza